mParticle: Qoqa bese Xhuma idatha yamakhasimende ngama-API aphephile nama-SDK | Martech Zone
Iklayenti lakamuva ebesisebenza nalo belinokwakhiwa okunzima okuhlangana ndawonye amapulatifomu ayishumi nambili kanye nezindawo zokungena ezingaphezulu. Umphumela waba ithoni lokuphindwaphindwa, izingqinamba zekhwalithi yedatha, nobunzima bokulawula ukwenziwa okuqhubekayo. Ngenkathi befuna sengeze kokunye, sincoma ukuthi bakhombe futhi basebenzise i-Customer Data Platform (CDP) ukuphatha kangcono wonke amaphuzu wokufaka idatha kumasistimu abo, ukuthuthukisa ukunemba kwedatha yabo, ukuhambisana namazinga ahlukile wokulawula, nokwenza ukuhlanganisa amapulatifomu amanye kube lula kakhulu.
Ipulatifomu yedatha yekhasimende le-mParticle
mParticle inama-API aqinile, aphephile nangaphezulu Amakhithi wonjiniyela wesoftware angama-300 + akhiqizwayo (I-SDKs) ukuze ukwazi ukuphatha kalula idatha yekhasimende lakho maphakathi, phaka ukuhlanganiswa ngokushesha, futhi uqinisekise ukuthi idatha yakho ihlanzekile, ihlanzekile, futhi iyahambisana. Ipulatifomu yabo inikeza:
Ukuxhuma kwedatha - Qoqa idatha enama-API aphephile nama-SDK futhi uyixhume kuwo wonke amathuluzi nezinhlelo zeqembu lakho. Finyelela idatha yamakhasimende lapho uyidinga khona ngaphandle kwenkinga yokuphathwa kwamakhodi avela eceleni. Ukuhlanganiswa kwezinhlelo zokukhangisa, amapulatifomu we-analytics, amapulatifomu wensizakalo yamakhasimende, amasistimu wokumaketha wezinhlelo zezimali, amapulatifomu wokuphathwa kwemvume, nezinkundla zokuvikela ziyatholakala Ama-SDK angama-300 +. Ungalayisha idatha kuzixazululo ezinkulu zokugcina idatha kufaka phakathi i-Amazon Redshift, i-Snowflake, i-Apache Kafka, noma i-Google BigQuery ngesikhathi sangempela. Noma, kunjalo, ungahlanganisa amapulatifomu akho nge-API yabo eqinile.
Ikhwalithi yedatha - Thuthukisa ikhwalithi yedatha yekhasimende lakho bese ubeka imininingwane emihle ngokuhlela, ukuphatha, nokuqinisekisa idatha yamakhasimende ngaphambi kokuthi kwabelwane ngayo nezinhlelo ezisezansi.
Ukuphatha idatha - Phatha ukuhambisana nemithetho yobumfihlo yedatha futhi usekele izidingo zokuphatha zenhlangano yakho. Vikela ubumfihlo bamakhasimende akho ngokwenziwa kwedatha, ukuthobela i-CCPA, izicelo zezihloko ze-GDPR, ukuphathwa kwemvume ye-GDPR, ukuvikelwa kwedatha kwe-PII, nokuphatha ukuhambisana nokuvumelana I-OneTrust.
Ukwenza ngezifiso okwenziwa ngedatha - Dala okuhlangenwe nakho komuntu siqu usebenzisa idatha yamakhasimende yomlando nesikhathi sangempela. Dala izethameli, izimfanelo ezibaliwe, amaphrofayili womsebenzisi we-omnichannel, nokusebenzisa LiveRamp ukuletha okwenziwayo okwenziwe ngezifiso kwamakhasimende
Xhuma nesazi se-mParticle ukuze uxoxe ngokuthi ungahlanganisa kanjani futhi uhlele idatha yamakhasimende ngendlela efanele yebhizinisi lakho.
Buka Konke Ukuhlanganiswa kwe-mParticle Hlola iDemo ye-mParticle
Tags: Ukuhlanganiswa kwe-AdTechukuhlanganiswa kokukhangisaI-Amazon Redshiftukuhlanganiswa kwezibaloApache KafkaApiisikhombi sokuhlela ukusebenzaezishintshayoidatha enkuluCDPidatha yekhasimendeidatha yamakhasimende apiIpulatifomu Yedatha Yamakhasimendeukuhlanganiswa kwamakhasimendeukuhlanganiswa kwesikhulumi sokuphathwa kwedathaukuhlanganiswa kwedatha yedathaukuhlanganiswa kwensizakalo yezezimaliI-Google BigQuerymParticleSnowflakeikhithi kanjiniyela wesoftware